Collage Maker eto Madagascar
Atombohy amin'ny famoronana fotoana fohy ny stickers-nao
Raha mitady fomba tsara ianao hanampiana fahafinaretana sy fahanginana amin'ny sarinao alainao, dia tokony hoheverinao ny manampy mpanamboatra collage amin'ny rakitsary nomerika misy anao. Misy safidy maro azonao isafidianana rehefa mitady mpanamboatra collage amin'ny Internet ianao. Ny seho lozisialy collage dia tsy mbola nisy velona toy izany niaraka tamin'ireo mpamorona collage an-tserasera maimaim-poana, modely collage an-tserasera maimaim-poana, ary na dia safidy be karama aza ao amin'ny tranonkala. Manana fotoana tsy manam-petra miaraka amin'ny sarinao ianao. Izahay dia nanangona ny fandaharana collage 21 tsara indrindra azo jerena an-tserasera hampiasaina hanaovanao ny rakitsary manaraka ny nofinao.
Collage Studio: iray amin'ireo fitaovana fanaovana collage malaza indrindra amin'ny Internet. Miaraka amina volavolan-tsafidy maimaim-poana an'arivony hisafidianana, ny mpampiasa dia manana famoronana sy fetra tsy manam-petra miaraka amin'ity mpanao collage mahafinaritra ity. Azonao atao ny mametraka ny sarinao eo an-tampon'ireo lohahevitra na mombamomba azy ireo na miaraka amin'ny fomba isan-karazany hanamboarana ny collage anao manokana amin'ny sary hitanao amin'ny Internet na avy amin'ny magazine. Ity dia iray amin'ireo programa mpanamboatra collage tsara indrindra an-tserasera mba hanombohana amin'ny tontolon'ny fanaovana collage.
iBuild Studio: iBuild Studio dia iray amin'ireo malaza indrindra sy mora ampiasaina indrindra amin'ny fampiharana fanovana sary sy retouching. Azonao atao ny manova, manova habe, manangona, manala ny maso mena ary maro hafa amin'ny fampiharana tsotra sy mora ampiasaina ity. Fanampin'izany, misy sticker mipetaka an'arivony azo isafidianana, ary maro amin'izy ireo no tsy vidiana akory! Ity dia safidy tsara ho an'ireo izay mitady mpanamboatra collage izay mora azo nefa mora vidy.
CropMom: Maherin'ny 500 ny sary avo lenta, ny mpampiasa dia afaka mamorona collage amin'ny karazana collage sary hitany an-tserasera. Ny programa dia miasa amin'ny Macs sy PC ary miaraka amin'ny torolàlana mora harahina. CropMom dia miaraka amina endrika fanampiana lehibe izay fenon'ny toro-hevitra sy fika amin'ny famoronana sary manaitaitra mora foana. Ity dia iray amin'ireo programa collage sary feno indrindra eny an-tsena ankehitriny. Ity koa dia iray amin'ireo sary an-tsary malalaka indrindra eny an-tsena!
Paintbrush Art Collage: Ity no zaza vao haingana indrindra eny an-tsena ary manenika ny firenena. Ity mpanao sary collage ity dia karazana programa plug and play izay mampiasa mpamoaka lahatsoratra WYSIWYG hahafahan'ny mpampiasa mamorona collage kanto tsara amin'ny sary na sary. Ny rindrambaiko dia mamela ny mpampiasa hanafatra sary na sary hosodoko amin'ny solo-sain'izy ireo na fakan-tsary nomerika ary hamadika azy ireo ho sary collage digital. Ny zavatra tsy manam-paharoa amin'ity programa ity dia ny ahafahanao mampiditra lahatsoratra amin'ireo sary na sary ampiasaina hanamboarana ny sarinao collage.
Instagram: Ity dia mpanamboatra sary an-tsary iray hafa izay nahatonga izao tontolo izao tamin'ny tafio-drivotra. Instagram dia mamela ny mpampiasa hizara sary erak'izao tontolo izao ao anatin'ny indray mipi-maso. Ity rindranasa ity dia azo ampiasaina hizarana sary manerana an'izao tontolo izao, miaraka amin'ny atiny hafa. Ny zavatra tsara indrindra momba an'ity rindranasa manokana ity dia azo havaozina an-tsitrapo izy nefa tsy mila miandry herinandro na volana maromaro mba hiparitaka be ilay vaovao.
Misy rindranasa hafa misy taonina azonao alalana raha mitady fomba mora hanombohana fanaovana sary-tsary ianao. Ireto dia vitsivitsy monja amin'ireo programa ambony malaza misy. Raha te hahay hanao ny collage-nao manokana ianao dia tsy misy toerana tsara hanombohana toy izay ny fizahana ireto programa ireto ho anao. Afaka mahazo vola ihany koa ianao raha maka sary erak'izao tontolo izao ary mandefa izany amin'ny Instagram sy tranokala media sosialy hafa.
Azonao atao mihitsy aza ny mandehandeha lavitra ary mamorona taratasy fametaka tsy manam-paharoa sy manokana mampiasa sary namboarinao Ny tokony ataonao dia ny mampakatra ny sarinao ao amin'ilay programa. Misafidiana isan-karazany amin'ny stiker izay asongadin'ilay tranonkala ary avy eo manomboka mamorona sangan'asao. Raha vantany vao vita ianao, dia ho afaka ny hisintona sy hitahiry ny sticker izay hahafahanao mampiasa azy ireo amin'ny sticker. Ity dia fomba tsara hanombohana ary ny vidin'ny fanombohana dia tsy misy dikany raha ampitahaina amin'ny zavatra azonao avy amin'ireo programa mpanamboatra sary namboarina naloany vola.